[Anju · Linyi] Ukuhlala okunokuthula/Isivakashi esisodwa nokubulala amagciwane/Indawo ezungeze amadolobha amakhulu/Amakamelo amabili/I-Downtown Taiyuan Street/imizuzu engu-10 ukusuka esiteshini sesitimela sase-Shenyang I-Home Theater - I-Airbnb
[Anju · Linyi] Ukuhlala okunokuthula/Isivakashi esisodwa nokubulala amagciwane/Indawo ezungeze amadolobha amakhulu/Amakamelo amabili/I-Downtown Taiyuan Street/imizuzu engu-10 ukusuka esiteshini sesitimela sase-Shenyang I-Home Theater
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Yi
U-Yi Ungumbungazi ovelele
sobhubhane, uma idolobha lakho noma i-Shenyang ngokuzumayo inokuqubuka, u-An Xiao angakhansela ukubhukha mahhala, sicela ubhukhe ngokuzethemba.Kwezinye izimo, imithetho yokukhansela yokubhukha kwasekuqaleni isalandelwa.
🌈 Mayelana ne- [Anjo]
U-Anjo uzinze ekhoneni ledolobha.
Njengomthandi wezokuvakasha, ithuba lokuqalisa indawo yokuhlala futhi lisuka enhlosweni yasekuqaleni. Ngithemba ukunikeza indawo yokuhlala ngomqondo wokuklama, ukuhlanzeka nokucoceka, futhi indlu injengoba injalo, ukuze labo abafuna ukukhetha indawo yokuhlala bajabulele impilo kangcono ngaphandle kokukhathazeka ~
🌈Mayelana nekamelo i-
indawo lapha yinhle kakhulu. Itholakala enkabeni ye-Shenyang, ukuwela umgwaqo yi-Taiyuan Street, esinye sezifunda ezimbili ezinkulu zebhizinisi e-Shenyang. Ukudla nokuthenga kulula kakhulu.Imizuzu eyishumi yokuhamba ngezinyawo ukuya esiteshini sase-Shenyang ukuphuma. Kunemigqa eminingi yamabhasi, kulula ukuya yonke indawo ~
☕️ Ukwamukela izihambi:
Izinto zombhede ezintsha zefenisha, amakamelo okulala amabili anombhede omkhulu owodwa, umbhede omkhulu owodwa, ontofontofo kubantu abangu-4. Umnyango unesikhiye sekhodi ehlakaniphile ukuze ufinyeleleke kalula. Ikhodi ekhiqizwe ngokuzenzakalelayo, ishintshelwe isivakashi ngasinye, iphelelwe yisikhathi ukuze uvikeleke.
1 ‧ IKEA Umatilasi (Ukulala Okujulile ‧ Ukuthula Ngokuphelele) ‧ IKEA Duvet, Umcamelo we-Duvet, Imfudumalo ne-Cozyliday sethemba ukuthi uzoba nokuphumula okungahleliwe.
I-Nut projector 3. 100m i-wifi engenantambo
4. Ukupholisa nokushisisa i-air conditioner ye-Oxx
5. I-Muji lazy sofa
6. Umshini wokuwasha i-haier drum (ukubulala amagciwane okushisa okuphezulu nomsebenzi wokomisa)
7. I-Haier Refrigerator, i-Water Heater
8. Ikhabethe Elijwayelekile
9. Izinto zasekhishini & Izinongo
10. Umshini wokomisa izinwele wezinwele
11. Izinto zetafula zezingane nezincwadi zezingane nazo zihlinzekwa izivakashi ezihamba nezingane.
Amanzi ashisayo wamahora angu-24, amashidi namathawula esivakashi ngasinye, amathawula okugeza, umuthi wokuxubha amazinyo alahlwayo, amabhulashi okuxubha, i-shampoo yegama lomkhiqizo kanye nokugeza umzimba, igama lomkhiqizo amathawula obuso kanye nephepha langasese, usuku lokungena kwamanzi amabhodlela amabili amancane.
4.94 · 135 okushiwo abanye
Indawo yami yokuhlala itholakala ku-Taiyuan North Street, omunye wemigwaqo emibili yabahamba ngezinyawo e-Shenyang. Kulula kakhulu ukuza lapha uzodla futhi uyothenga. Kungaba uhambo lwemizuzu eyishumi ukusuka eShenyang Station kanye nomgwaqo ongaphansi komhlaba. Kunezitobhi zamabhasi eziningi ezansi, futhi kulula kakhulu ukuhamba ngebhasi.
Ipaki itholakala esakhiweni esingokomlando eduze kwehhovisi leposi laseTaiyuan Street, elaziwa yibo bonke abantu abadala baseShenyang. Bude buduze nalapha kunomgwaqo u-Shenyang Ouzhou e-Shenyang lapho kubuthana khona izakhiwo eziningi ezindala. Lona umgwaqo engiwuthanda kakhulu. Kukhona amabha, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela zasentshonalanga, imitapo yolwazi. Ungeza lapha ukuze uzulazule uma unesikhathi sokubona izakhiwo zomlando zakudala, noma uphuze inkomishi yekhofi buthule ufunde incwadi, noma uphuze iziphuzo ezimbalwa nabangane. . esihle ukukhetha ~
UYi Ungumbungazi ovelele